विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ नै दोहोरिने निश्चित…हेर्नुहोस् । कुलमान नै नियुक्ति हुनुपर्छ भन्नेले सेयर गरौ !
काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधि’करणको कार्यकारी निर्दे’शकमा कुलमान घिसिङ दोहो’रिने नि’श्चित भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले शुक्रबार घिसिङलाई नै दोस्रो कार्यकालका लागि नियु’क्ति गर्नेगरी प्र’स्ताव तयार पारेको छ ।
सो प्र’स्ताव आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बै’ठकमा ऊ’र्जामन्त्री वर्षमान पुनले लैजाने मन्त्रीका प्रेस संयो’जक दयानिधि भट्टले जानकारी दिए। स्रोतका अनुसार कुलमानलाई फेरि नियु’क्ति गर्ने पक्षमा नरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत अन्ततः राजी भएका छन् ।
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भएको छलफलपछि उनी कुलमानलाई नै नियुक्त गर्न राजी भएका हुन्। नेपाल विद्युत प्रा’धिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको ४ वर्षे कार्यकाल आइतबार सकिँदै छ । लो’डसेडिङबाट आक्रा’न्त जनतालाई लोड’सेडिङ अन्त्य गराएर उ’ज्यालो दिएका घिसिङको पक्षमा अहिले आम जनता उभिएका छन्।
सातौँ तहको इन्जि’नियरबाट (२०५१ सालमा) नेपाल विद्युत प्रा’धिकरणमा प्रवेश गरेका घिसिङ २०७३ भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा नियुक्त भएका थिए । उनी नि’युक्त भएको २ महिनापछि कात्तिकको लक्ष्मी’पुजाको दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकाबासीले लोड’सेडिङको मा’र खे’प्नु परेको छैन ।
अरुले लक्ष्मी पूजा मनाइरहँदा उनी स्युचाटारको भार’प्रेषण के’न्द्रमा लोड’सेडिङ हुन नदिन अनवरत खटि’रहेका घिसिङले ३१५ मेगा’वाट सम्मको माग धान्न सफल भएर आम मानिसको मन जितेका थिए।
Previous प्रजिअ ज्यु जनताले मास्क नलगाउदा जरिवाना तिर्नुपर्ने, तपाईंले नि ? पूरा पढ्नुहोस् ।
Next नेपाललाई लोडसेडिङमु’क्त बनाइ ४ वर्षे कार्य’काल सकाएर बिदा भए कुलमान…हेर्नुहोस् । फेरि नियुक्त हुनिपर्छ भन्नेहरुले सक्दो सेयर गर्नुहोस् ।